San Htun's Diary: ဘော့စတွန်သွား တောလား...၁
ဇွန် ၂၉ ၂၀၁၂ သောကြာနေ့ 
သူများတကာ ဖလမ်းဖလမ်းထနေချိန် စန်းထွန်းတကောင် ဖလမ်းဖလမ်း မထနိုင်။ အလုပ်လက်စသတ်နိုင်ရေး ကွန်ပျူတာထဲ ခေါင်းစိုက်နေလေရဲ့ ။ စီနီယာက အချိန်ယူပြီး အေးအေးဆေးဆေးလုပ်လို့ပြောပေမယ့် စိတ်ဖိစီးမှုကို ကိုယ့်ဘာသာ ရှာကြံယူတတ်တယ့် ထုံးစံအတိုင်း အပြီးသတ်နိုင်ရေး ဇွဲခတ်နေလေရဲ့ ။ Assignment ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ စောစောတင်လေ့မရှိ။ စောစောတင်နိုင်ရေး ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစား နောက်ဆုံးနေ့ မှ အသည်းအသန် ကတိုက်ကရိုက် အူယားဖားယား တင်လေရဲ့ ။ Assignment နောက်ဆုံးရက် ဇူလှိုင် ၁ တနင်္ဂနွေ ဘော့စတွန်မှာ ဖလမ်းဖလမ်းထနေမှာ။ Assignment တင်ဖြစ်မယ် မထင်။ နေ့ လည် ထမင်းစားချိန် အရင်လို သတင်းမဖတ်တော့ဘဲ စာလုပ်ဖြစ်တယ်။
ညနေ ၄နာရီ အလုပ်တွေ မပြီးလည်း ၁၀၁ ဒီဂရီ ခြစ်ခြစ်တောက် ပူပြင်းတယ့် နွေညနေခင်းမှာ လေဆိပ်ဆီ ချီတက်ပါတော့တယ်။ လောလောနဲ့ကားနောက်အဆုတ် ဘေးကကားကို ဝင်အောင်းတယ်။ နောက်လည်းဆုတ်လို့ မရ၊ ရှေ့ လည်းတိုးလို့ မရ တော်တော်ရင်တုန်သွားတယ်။
အတော်လေး ရုန်းကန်လိုက်မှ ကွေ့ လို့ ရသွားတယ်။ ဟူး..တော်ပါသေးရဲ့ ။ အသာလေး လေဆိပ်ကို မောင်းချသွားတယ်။ GPS အကူအညီနဲ့လေဆိပ်ကို ရောက်ပေမယ့် Surface Parking Lot ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကို မြင်နေရဲ့ သားနဲ့ ၊ ကားပါကင်ကြီးကို မြင်နေရဲ့ သားနဲ့လမ်းမတွေ့ လို့၂ခေါက် ပတ်မောင်းခဲ့ရလေရဲ့ ။ အဝင်ဂိတ်မှာ ပါကင်းဝင်းထဲ ဝင်တယ့် နေ့ စွဲ၊ အချိန်နာရီ မှတ်ထားတယ့် Receipt လေးရတယ်။
လေဆိပ်မှာ လာကြိုပို့ သူတွေအတွက် ကားကို ခဏပဲ ရပ်လို့ ရတယ်။ တော်တော်ကြာကြာရပ်ထားရင် ရဲက လာပြောတယ်။ Under Four Hours Area မှာ ပါကင်ရင် တနာရီ ၁ကျပ်၊ Over Four Hours Area မှာ ပါကင်ရင် တနာရီ ၂ကျပ်၊ Surface Lot မှာ ပါကင်ရင် တနေ့၉ကျပ်။ ကားကို လေဆိပ်မှာ ရက်ရှည်ထားမယ့်သူတွေကတော့ Surface Lot မှာ ပါကင်ကြပါတယ်။
ဘော့စတွန်ခရီးက စတိတ်ကို ရောက်ပြီး တစ်နှစ်ကျော်မှ သွားဖြစ်တယ့် ပထမဆုံး လေယာဉ်ခရီးစဉ်။ ကျောင်းကနေ အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ဖို့ ဝိန်းမြို့၊ အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီမြို့တွေကို သွားတုန်းက ဘတ်စ်ကားနဲ့သွားခဲ့တာ။ လေယာဉ်ခ မတတ်နိုင်လို့းP။ ဘတ်စ်ကားခက သက်သာတယ်၊ ဒါပေမယ့် အချိန်ကြာတယ်။ အိုင်အိုဝါပြည်နယ်ကနေ ချီကာဂိုမြို့ရှိတယ့် အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီမြို့အထိ ၄၇၁မိုင်ဝေးပြီး ကားမောင်းရင် ၈နာရီကျော် မောင်းရတယ်။ ဘတ်စ်ကားစီးရင် မနက် ၁၁နာရီက စီးလိုက်တာ နောက်နေ့ မနက်မှ စင်စင်နာတီကို ရောက်ပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားခက ၁၀၀ ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။
ကန်တက်ဂီပြည်နယ် လူးဝစ်ဗီလ်ကနေ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ဘော့စတွန်ကို မိုင်တထောင်ကျော်ဝေးပြီး ကားမောင်းရင် ၁၇နာရီ မောင်းရတယ်။ လေယာဉ်စီးရင်တော့ ၃နာရီလောက်ပဲ စီးရတယ်။ လွန်ခဲ့တယ့် ၂လလောက်ကတည်းက ဘွတ်ထားတာမို့ လို့ ၊ ကျောင်းသားမို့ လို့ဒစ်စကောင့်နဲ့ တောင် ၄၃၀ ပေးရပါတယ်။ ဇူလှိုင်၎ အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးနေ့ ရုံးပိတ်ရက်က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှာ ကျရောက်တာမို့၂ရက်လောက်ခွင့်ယူ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်နဲ့ ပေါင်းပြီး ခရီးသွားကြတယ့်အချိန်အခါသမယမို့လေယာဉ်ခက အတော့်ကို ဈေးကြီးပါတယ်။
ညနေ ၅နာရီ United Air မှာ Check In ဝင်တော့ ဟမ်းကယ်ရီအိတ်က ၂၅ပေါင် ကျော်နေလို့၂၅ပေးလိုက်ရတယ်။ ဂျင်းဘောင်းဘီ ၂ထည်၊ ဂျင်းဂျက်ကက်နဲ့ တင် ၂၅ပေါင် ဖြစ်နေပြီ ။ စတိတ်ကို လာတုန်းက ၂၃ KG အလေးချိန်ရှိတယ့် အိတ်၂လုံးနဲ့ဟမ်းကမ်ရီသယ်ခွင့် ရှိပါတယ်။ စတိတ်ကို အသား၊ သစ်သီးသစ်ရွက်အစေ့တွေ သယ်လို့ မရပါဘူး။ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် စစ်ဆေးပါတယ်။ အီတလီက သစ်ရွက်လေးလှလို့စာအုပ်ကြားထဲ ညှပ်လာတယ့် Megan တယောက် စတိတ်လေဆိပ်လည်းရောက်ရော အမှိုက်ပုံထဲ ရောက်ပါလေလေရော။ ကိုယ်တို့အင်္ဂလိပ်စာတီချယ် ကာလိုရိုင်း ဟာဝိုင်အီက ပန်းကုံးလေး ဆွဲလာတာ စတိတ်လေဆိပ်လည်းရောက်ရော အမှိုက်ပုံးထဲ ဂျောင်းတော့တာပဲ။
စတိတ်ကိုအလာ ချီကာဂိုမှာတုန်းက ကိုယ့်နောက်က ဟောင်ကောင်တရုတ်ကြီးအိတ်ကို စကန်ဖတ်တာ တီတီမြည်တာနဲ့Security က အမဲသားသယ်လာတာလားလို့မေးတော့တာပဲ။ Yanzi ပြောဖူးတာတော့ သြဇီမှာ ကျိုင်းကောင်တွေကျလို့ဂျုံခင်းတွေ ပျက်စီးတာ ကျိုင်းကောင်းတွေကို စားတယ့် တခြားနိုင်ငံက ဖားတွေ မှာယူပြီး ဂျုံခင်းတွေထဲ ထားတာ ကျိုင်းကောင်တွေကိုတော့ နှိမ်နင်းပါရဲ့ ။ ဒါပေမယ့် ဖားကောင်ရေက အဆမတန်များပြားလာလို့မနည်းထိန်းချုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုပဲ။ ဒေသခံမဟုတ်တဲ့ အရပ်ဒေသမှာ ရှင်သန်ကြီးပြင်းရတယ့် အပင်၊ အကောင်ပလောင်တွေဟာ အဲဒီအရပ်ဒေသမှာ မရှင်သန်နိုင်ရင် သေရင်သေ၊ မသေလို့ရှင်ရင်လည်း ဒေသခံမျိုးစိတ်တွေထက် ပိုရှင်သန်၊ ပိုပွားများ ဒီနှစ်နည်းပဲ ရှိပါသတဲ့။ ဒေသခံမျိုးစိတ်တွေကို ထိန်းသိမ်းချင်ရင် နိုင်ငံခြားမျိုးစိတ်တွေ ဝင်ရောက်လာတာကို သေသေချာချာ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် စစ်ဆေးရပါတယ်တဲ့။ နွားရူးရောဂါပိုးရှိတဲ့ အမဲသားတင်သွင်းလာမှာစိုးရိမ်လို့အမဲသားတင်သွင်းတာကို သေသေချာချာ စစ်ဆေးပါတယ်။
Check In ပြီးတာနဲ့Security စစ်ဖို့Q တန်းကြီးက အရှည်ကြီး။ ဖိနပ်၊ နာရီ၊ ဖုန်း၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ ကွန်ပျူတာ၊ ကင်မရာ၊ ပုဆိန်တံဆိပ်လေဆေးဆီ၊ ရေဗူး စကန်ဖတ်ရင် အသံမြည်မယ်ထင်တဲ့ အရာမှန်သမျှ ဗန်းထဲထည့်ပြီး စကန်ဖတ်။ လူကလည်း စကန်ကြီးရှေ့ မှာ လက်မြှောက်ပြီး အစစ်ခံရတယ်။ Boarding Pass မှာ ဂိတ် A21 ရေးထားလို့စောင့်နေတာ A22 ဂိတ်က ဘုတ်မှာ ကိုယ်သွားမယ့် Newark Liberty Intl(EWR) ပေါ်နေပြီး လေယာဉ်နံပါတ်ကလည်း တူနေလို့သွားမေးကြည့်တာ Last Call for Boarding ပါတဲ့ ခင်ဗျား။ အမယ်မင်း..ကံသီပေလို့ ..သွားမေးကြည့်ပေလို့ သာပေါ့။ မေးများမမေးဘဲ ဂိတ် A21 ကိုသာ စောင့်နေရင်တော့ ဒုက္ခပဲ။
နယူးယောက်ကို ၂နာရီ စီးရပါတယ်။ မိုးမျှော်တိုက်တွေ၊ များပြားလှတဲ့ အဆောက်အဦးတွေကြားထဲ Empire State Building က ဘယ်နားမှာပါလိမ့်။ Liberty Statue က ဘယ်နားမှာပါလိမ့်နဲ့တွေ့ လိုတွေ့ ငြား ရှာကြည့်သေးတယ်။ တနေ့ တော့ ရောက်အောင်လာခဲ့ဦးမယ် နယူးယောက်ရေ။ လေယာဉ်က မြေပြင်ကို ဆင်းသက်ပြီး မီးပွိုင့်မိနေလို့လေဆိပ်ရောက်ဖို့၁၅မိနစ်လောက် Q နေရသေးတယ်။ Terminal C ကို Shuttle Bus နဲ့သွားရပါတယ်။ သြော် နယူးယောက်၊ နယူးယောက်။ လေဆိပ်တခုလုံး လူတွေ ဒင်းကြမ်းပြည့်နေလိုက်တာ။ ဆူနမ်ဆီ ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့ သူ့ လေယာဉ် Delay ဖြစ်လို့စင်စင်နာတီမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။ သူ့Transit ဖြစ်တဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီရောက်မှ ဖုန်းထပ်ဆက်လိုက်မယ်တဲ့။
နယူးယောက်ကနေ ဘော့စတွန်ကို လေယာဉ်တနာရီလောက် စီးရပါတယ်။ လေယာဉ်က နည်းနည်းကြီးတယ်။ ည ၁၁ နာရီ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ထက် ၁၅ မိနစ်ခန့် နောက်ကျပြီးမှ ဘော့စတွန်မြို့တော်ကြီးကို ရောက်ပါတယ်။ ရာမားရဲ့အခန်းဖော် အင်ဒိုနီးရှားမလေး နေတီက လာကြိုနေပါတယ်။ ဘော့စတွန်ကနေ ၁နာရီ အဝေးမှာရှိတဲ့ ရာမားနေထိုင်တဲ့ Gloucester မြို့ဆီ ချီတက်ရပြန်တယ်။ ည၁၂ကျော် အိမ်ရောက်လို့ရာမား ဗိုက်ဆာတယ် ဘာချက်ထားလည်း မေးတော့ ရေခဲသေတ္တာကြီးကို ဖွင့်ပြတယ်။ နီပါလီဟင်းတွေက အများကြီး။ ဒါပေမယ့် တခုမှ နင်စားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားတဲ့။ အဟင့်... တော်တော် လည်ပင်းညှစ် အဲလေ ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း။
ဆူနမ်ကတော့ ဝါရှင်တန်ဒီစီကို ချောချောမောမောရောက်ပေမဲ့ တော်နေဒိုးဝင်မွှေထားလို့ဝါရှင်တန်ဒီစီလေဆိပ်မှာ ခရီးစဉ်အားလုံးဖျက်သိမ်း။ မြို့တော်ကြီးကလည်း အမှောင်ကျလို့ ။ စနေနေ့ ည ၆နာရီမှ ဘော့စတွန်ကို သွားမယ့် လေယာဉ်ရှိတာမို့ဆူနမ်တယောက် ဝါရှင်တန်ဒီစီလေဆိပ်မှာ နောက်ထပ်တနေ့ဆက်စောင့်မလား၊ စနေနေ့ မနက် ၈နာရီ ဘော့စတွန်ကို သွားမယ့် လေယာဉ်မှီအောင် ဝါရှင်တန်ဒီစီလေဆိပ်ကနေ မိနစ်၄၀လောက် ကားမောင်းရတဲ့အဝေးမှာ ရှိတဲ့ တခြားလေဆိပ်ကို ဆူနမ်တယောက် အရောက်သွားနိုင်မလား...
ဇူလှိုင် ၇၊ ၂၀၁၂။
ဟုတ်တယ်စန်းထွန်းရ။ လေယာဉ်နဲ့ သွားရင်ဘိုးဒင်းပတ်စ်မှာရေးထားတဲ့ ဂိတ်နံပါတ်ကိုဘယ်တော့မှမယုံစားလေနဲ့ ။ အမြဲတန်းတီဗီမှာပေါ်နေတာနဲ့ သာစစ်။ အဲဒါမှစိတ်ချရတာ။ နုို့ မဟုတ်လို့ ကတော့ဟုိုပြေးဒီပြေးဖြစ်တတ်တယ်။ ကုိုယ်လည်းနှစ်ချီကြုံဘူးကတည်းကသိသွားတာ။း)
ခဏခဏ စားဖြစ်တယ် အဲဒီခေါက်ဆွဲပဲလေ
နောက်တင်တဲ့ ပိုစ့်က ဘော့စတွန်ရောက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်မယ်
နောက် အဲဒီခေါက်ဆွဲလည်း ကြိုက်တယ်.း)
ခဏခဏ ခရီးသွားချင်တာ.. စန်းထွန်းကို အားကျသွားတယ်။
လေဆိပ်မှာ ဒေါင်းချာစိုင်းနေမယ့် သူငယ်ချင်းလေးကို မြင်ယောင်လိုက်တယ် :)
ပြေးလွှားနေတာ နယူးယောက်လူသားတွေရဲ့ ၊
အမှတ်သင်္ကေတ ဖြစ်မယ်နဲ့ တူတယ်နော်။
လေယာဉ်က မြန်တာ မှန်ပေမယ့် ဘတ်စ်တွေကလည်း တခါတခါ ရှုခင်းတွေ ကြည့်ဖို့ အတော်ကောင်းမယ် ထင်တယ်နော်၊ အဲ.. အပင်ပန်း ခံနိုင်ရင်ပေါ့လေ၊း) ယူအက်စ်က လေဆိပ်တွေ တင်းကြပ်ပုံကတော့ လူတွေ အတော်ပြောကြတာ ကြားဖူးတယ်၊ ဆက်ရန်ကို စောင့်နေတယ် ညီမရေ..။
ခရီးတွေ သွားနေတာ မနာလိုဘူးနော်... ဟင်းဟင်း...:):) ဗိုက်ဆာလို့ပါ..စန်းထွန်းရယ် .:P:P
ပြည်တွင်းခရီးစဉ်တောင် အဲဒီလောက် ဈေးကြီးနေမှတော့ ဟိုသွားဒီသွား မလွယ်ပါလား။ ဒါတောင် ကျောင်းသား ဒစ်စကောင့်တဲ့။ တော်ပီ။ ကန်ကိုတော့ လာချင်တော့ဘူး။ စန်းထွန်းတင်တာဘဲ ကြည့်တော့မယ်။ အဲဒါကမှ အကုန်လဲ သက်သာ ကြည့်စရာတွေလဲ ကြည့်ရ။း)
လမ်းခရီးမှာ အစစ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေညီမရေ..
တစ်နေ့တည်းနဲ့ ဘော်စတွန်သွား တောလားခဲ့ပါတယ်...:)